Lampard Oo Uxiisay Kooxdiisii Hore E Chelsea | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Lampard Oo Uxiisay Kooxdiisii Hore E Chelsea
Halyeygii mudada dheer u soo halgamayay kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa ayaa maanta dib u gocday waayihiisii uu la joogay kooxda Chelsea isagoona sheegay in uu ka qoomameynayo in uu ka tagao koox qalbigiisa jeex dhan ku lahayd.
Lampard oo saxaafadda gudaha ee ciyaaraha ka faaloota ee dalka England maalintii oo jimce ahayd la hadlayay ayaa intaa hadalkiisa ku sii daray in uu ka xun yahay in isagoo kooxda Chelsea raba mudo dheerna u soo ciyaaray rabitaankiisa ay Blues tixgalin weyday ayna xitaa u awoodi wayday in sanadkale ay ugu darto si uu ula sii joogo.
“Marna ma doonayn in aan ka hawa gadisto London iyo dhulkayga hooyo, waxaan Chelsea la soo qaatay sanadda badan oo xasuus qurux badan lahayd, laakiinse fursad wey iisiin waayeen in aan sanad kale la sii joogo, taasna waa mid igu khasabtay in aan iska tago oo meel kale iska aado.”
“Lampard ayaa docda kale sheegay in uusan maanta taageerayaashisii hore uusan ku dhihi Karin macsalaama ama nabad galyo isagoona intaa ku daray in ay la tahay in uu wali la joogo halka ay joogaan maadaama xasuustiisa aysan ka go,in wali Chelsea.”
Si kastaba xiddigan qadka dhexe sida aadka ah uga xamaali jiray kooxda Chelsea ee Lampard oo mudo 13 sano ah la soo joogay Blues ayaa dhaliyay 211 gool 649 kulan uu u saftay kooxda Chelsea.